စနေနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ နံနက်ခင်းသတင်းတိုများ ……. – Myan Ball
စနေနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ နံနက်ခင်းသတင်းတိုများ …….
၁။ အဓိက ကွင်းလယ်ကစားသမားကို အသင်းမှာ ဆက်ထိန်းထားဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ ဆောက်သမ်တန်နည်းပြ
ဆောက်သမ်တန်နည်းပြ ရက်ဖ်ဟက်ဆန်ဟက်တဲလ်က အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဟို့ချ်ဘတ်ချ်ကို အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် ဒိန်းမတ်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း နောက်ဆုံး ကာလကို ရောက်ရှိနေပြီး ရက်ဒ်မွန်းကို (၄) နှစ် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးပြီးနောက် ဟို့ချ်ဘတ်ချ်ကိုပါ အသင်းမှာ ဆက်ထိန်းထားဖို့ ပြင်ဆင်လာတာပါ။
၂။ ဆန်ချိုအတွက် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေဆဲ ယူနိုက်တက်
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေဆဲလို့ သိရပါတယ်။ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ် ဒီကစားသမားလေးကို ခေါ်ယူဖို့ ယူနိုက်တက်အသင်းက ကာလရှည်ပစ်မှတ်ထားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး လာမယ့် နွေရာသီမှာတော့ ဆန်ချိုအတွက် လိုအပ်သလောက် ငွေကြေးသုံးစွဲသွားမှာပါ။
၃။ ဟေလာအတွက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို နောက်ကောက်ချခဲ့တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ဖရန့်ဖတ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟေလာကို ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းထက် လက်ဦးမှု ရယူပြီးခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကလည်း လီဝန်ဒေါစကီးရဲ့အရံတိုက်စစ်မှူးနေရာအတွက် ဟေလာကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပေမယ့် ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း ပေးချေခဲ့တဲ့ ပေါင် (၄၅) သန်းဆိုတဲ့ ပမာဏကိုတော့ ပေးချေနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
၄။ ဒေါက်ဂလပ်စ်ကော်စတာကို ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်
အီတလီစီးရီးအေကလပ် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဒေါက်ဂလပ်စ်ကော်စတာကို ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ တူရင်မြို့ခံကလပ် အသင်းဟာ ဒီဘားလားကို ဦးစားပေး ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး ဒေါက်ဂလပ်စ်ကော်စတာကို ရောင်းချဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပေါ့ဘာအတွက် အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
၅။ စပိန်ကို ပြောင်းဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ လိုက်ဇစ်ပ်ကွင်းလယ်လူ
လိုက်ဇစ်ပ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား ကီဗင်ကမ်းပဲလ်ဟာ လာလီဂါကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် (၂၈) နှစ်အရွယ် ဆလိုဗေးနီးယား ကစားသမားဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း (၂) နှစ် ကျန်ရှိနေပြီး အီတလီ၊ အင်္ဂလန်တို့ကိုလည်း ပြောင်းရွှေ့လိုပေမယ့် စပိန်လာလီဂါကတော့ ဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။
၆။ အဲရစ်ဆင်ကို စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ စပါး
စပါးအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား အဲရစ်ဆင်ကို စာချုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ အဲရစ်ဆင်ဟာ လက်ရှိရာသီအပြီးမှာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး စပါးအသင်းက တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင် (၂၃၀,၀၀၀) နဲ့ စာချုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းလိုက်တာပါ။
၇။ ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူရတော့မယ့် အာဆင်နယ်ရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး လာကာဇက်ဟာ ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အောက်တိုဘာလအထိ အနားယူရတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီပြင်သစ်တိုက်စစ်မှူးဟာ အူဘာမီးယန်းနဲ့ အတွဲညီညီ ခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး လာကာဇက်ရဲ့ ဒဏ်ရာသတင်းက အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၈။ နေမာပြန်လာဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ PSG နည်းပြ
PSG အသင်းနည်းပြ သောမတ်စ်တူချယ်လ်က အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး နေမာဟာ စထရာဘော့အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်မယ့် ပြင်သစ်လီဂူးပွဲစဉ်မှာ ပြန်လည် ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ နေမာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေ ကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေဆဲ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိရာသီမှာ ပဲရစ်မြို့ခံကလပ်အသင်းအတွက် တစ်ပွဲမှ မကစားပေးရသေးပါဘူး။
ဒီဂီယာကို ဖရီးကြိတ်ဦးမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့အတူ အခြားသောနေ့လယ်ခင်းသတင်းတိုများ ……
ကစားသမားဘဝကို နှုတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အီတူးရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်စကား …..
ဒီဘားလား နဲ့ အဲရစ်ဆင်ကို အလဲအထပ် ပြုလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ စပါးနဲ့အတူ အခြားသောနံနက်ခင်းသတင်းတိုများ …..